Nurse | EMC Manufacturing Limited. ﻿
•	အသက် ၂၅ မှ ၄၀ အတွင်းရှိသူဖြစ်ရမည်။
•	သူနာပြု သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်ရရှိထားရမည်။
•	ဆေးရုံ(သို့)ဆေးခန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး(၂)နှစ် ရှိရမည်။
•	စက်ရုံအတွင်းရှိ အလုပ်သမားများအား ရုံးထိုင်သူနာပြုအနေဖြင့် စောင့်ရှောက်ပေးသော အတွေ့အကြုံရှိသူအား ဦးစားပေးမည်။
•	စက်ရုံညဆိုင်းလည်ပတ်ချိန် ညဆိုင်းဆင်းနိုင်ရမည်။
•	မိသားစုစိတ်ဓာတ်ဖြင့် ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာရေးအား စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
•	အလုပ်သမားများ၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအား မှတ်တမ်းများ ပြုလုပ်ပေးနိုင်ရမည်။
Work location 2/B,No.(3) Main Rd, Mingalardone Industrial Park,Yangon,Myanmar
Company Industry: Nurse
246 Days, Full time , Manufacturing
247 Days, Full time , Manufacturing
Nurse Health & Medicine jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon EMC Manufacturing Limited Health & Medicine jobs Health & Medicine jobs Nurse Jobs in Myanmar, jobs in Yangon